Yosua 6 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
6 Yeriko de, Israelfo no nti, na wɔato kurow no mu abram ano; obi nkɔ, na obi mma.+ 2 Na Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Hwɛ, mede Yeriko ne ne hene ne ne nnɔmmarima ahyɛ wo nsa.+ 3 Enti mmarima akofo no nyinaa mmɔ nsra mfa kurow no ho nyinaa pɛnkoro. Monyɛ saa nnansia. 4 Asɔfo baason mfa nguan mmɛn ason nni Adaka no anim. Na da a ɛto so ason no mommɔ nsra mfa kurow no ho nyinaa mpɛn ason, na asɔfo no nhyɛn mmɛn no.+ 5 Sɛ wɔhyɛn abɛn* no na mote abɛn no nnyigyei a, asafo no nyinaa nteɛm denneennen;+ na kurow no fasu nyinaa bedwiriw agu.+ Ɛba saa a, obiara nkɔ n’anim tēē.” 6 Enti Nun ba Yosua frɛɛ asɔfo+ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa apam adaka+ no, na asɔfo baason mfa nguan mmɛn ason nni Yehowa adaka+ no anim.” 7 Afei ɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Monsen nkɔbɔ nsra mfa kurow no ho, na asraafo+ no nni Yehowa adaka no anim.” 8 Enti ɔman no yɛɛ nea Yosua ka kyerɛɛ wɔn no pɛpɛɛpɛ; na asɔfo baason a wokurakura nguan mmɛn ason wɔ Yehowa anim no bedii anim hyɛn mmɛn no, na Yehowa apam adaka no dii wɔn akyi. 9 Ná asraafo no di asɔfo a wɔrehyɛn mmɛn no anim, na wɔn a wɔbɔ kyidɔm+ no nso di Adaka no akyi bere a asɔfo no gu so rehyɛn mmɛn no. 10 Ná Yosua aka akyerɛ ɔman+ no dedaw sɛ: “Monnteɛm na mommma obi nnte mo nne, na mummmue mo ano nnka biribiara kosi sɛ mɛka akyerɛ mo sɛ, ‘Monteɛm!’ ansa na moateɛm.”+ 11 Na ɔma wɔde Yehowa adaka no twaa kurow no ho hyiae pɛnkoro, na wɔsan kɔɔ wɔn asoɛe kɔdae ma ade kyee. 12 Afei Yosua sɔree anɔpahema,+ na asɔfo no faa Yehowa adaka+ no. 13 Ɛnna asɔfo baason a wokurakura nguan mmɛn ason no hyɛn mmɛn no dii Yehowa adaka no anim, na asraafo no nso dii wɔn anim. Afei wɔn a wɔbɔ kyidɔm no dii Yehowa adaka no akyi bere a asɔfo no gu so rehyɛn mmɛn no.+ 14 Da a ɛto so abien no nso wɔbɔɔ nsra faa kurow no ho nyinaa pɛnkoro, na wɔsan kɔɔ wɔn asoɛe. Wɔyɛɛ saa ara nnansia.+ 15 Na da a ɛto so ason no, anɔpahema a anim rebaabae no ara na wɔsɔree, na wɔkɔfaa kurow no ho saa ara mpɛn ason. Saa da no nkutoo na wɔbɔɔ nsra faa kurow no ho nyinaa mpɛn ason.+ 16 Eduu nea ɛto so ason so no, asɔfo no hyɛn mmɛn no na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Monteɛm,+ na Yehowa de kurow no ama mo.+ 17 Kurow no yɛ abusude a ɛsɛ sɛ mosɛe no;+ ɛno ne biribiara a ɛwom yɛ Yehowa dea. Aguaman Rahab+ ne obiara a ɔka ne ho wɔ ne fie nkutoo na wɔbɛka, efisɛ ɔde nnipa a yɛsomaa wɔn no siei.+ 18 Mo nso, montwe mo ho mfi abusude biara ho,+ na mo kɔn annɔ,+ na moamfa abusude no bi,+ na Israel nsraban no annan abusude na ankɔfa ɔhaw biara amma so.+ 19 Na dwetɛ ne sika kɔkɔɔ ne nneɛma a wɔde kɔbere ne dade ayɛ nyinaa yɛ Yehowa akronkronne.+ Ɛsɛ sɛ ne nyinaa kɔ Yehowa adekorabea.”+ 20 Afei wɔhyɛn mmɛn+ no, na nkurɔfo no teɛɛm. Bere a ɔman no tee abɛn no a wɔteɛɛm denneennen no, ɔfasu no dwiriw guu fam.+ Afei obiara de n’ani kyerɛɛ kurow no mu na wɔfaa kurow no. 21 Wɔde nkrante faa kurow no mu sɛee biribiara a ɛwɔ hɔ, mmarima ne mmea, mmerante ne nkwakoraa, anantwi ne nguan ne mfurum.+ 22 Ɛnna Yosua ka kyerɛɛ mmarima baanu a wɔkɔhwɛɛ asase no sɛ: “Monkɔ ɔbea aguaman no fie nkɔfa ɔne wɔn a wɔka ne ho nyinaa mmra, sɛnea mokaa no ntam no.”+ 23 Enti mmarima a wɔkɔhwɛɛ kurow no kɔfaa Rahab ne ne papa ne ne maame ne ne nuabarimanom ne wɔn a wɔwɔ ne nkyɛn nyinaa, n’abusuafo nyinaa, bae.+ Na wɔma wɔtenaa Israelfo nsraban no akyi. 24 Afei wɔde ogya hyew kurow no ne emu nneɛma nyinaa.+ Dwetɛ ne sika kɔkɔɔ ne nneɛma a wɔde kɔbere ne dade ayɛ nkutoo na wɔde kɔɔ Yehowa fie adekorabea.+ 25 Na Yosua koraa aguaman Rahab ne ne papa fiefo ne wɔn a wɔwɔ ne nkyɛn nyinaa so,+ na ɔtenaa Israelfo mu besi nnɛ,+ efisɛ ɔde nnipa a Yosua somaa wɔn ma wɔkɔhwɛɛ Yeriko no siei.+ 26 Afei Yosua kaa ntam saa bere no sɛ: “Nnome nka obiara a ɔbɛkyekye Yeriko kurow yi wɔ Yehowa anim. Sɛ ɔto kurow no fapem a, ɔde ne ba panyin betwa so, na osisi n’apon a, ɔde ne ba kumaa betwa so.”+ 27 Enti Yehowa gyinaa Yosua akyi,+ na ne din trɛwee wɔ asase nyinaa so.+
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne “odwennini abɛn.”